Madaxda Sucuudiga, Eritrea iyo Itoobiya oo Sucuudiga ku kulmaya - Halbeeg News
JIDDA(HALBEEG) Sida ay sheegayaan ilo wareedyo diblumaadiyadeed oo kasoo baxa dalka Sucuudiga, magaalada Jidda ayaa Axadda soo socota marti gelin doonta shir madaxeed dhex mari doona dowladaha Sucuudiga, Eritrea iyo Itoobiya.
Shirka ayaa la filayaa in ay dowladaha ku kala saxiixdaan heshiisyo ka tarjumaya danaha sadexda dal waxaana kulanka kasoo qeyb gali doona Boqorka dalka Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Bin Salmaan.
Waxaa la rajeynayaa in Madaxweynaha Eritrea Asaias Afwerki iyo Raiisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ay Sucuudiga gaaraan galabka Sabtida ama maalinka Axadda ah ee nasoo aadan.
Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea ayaa isu furaya xuduudaha maalmihii lasoo dhaafay kadib heshiis taariikhi ah oo soo afjaray colaad labaatankii ee lasoo dhaafay u dhexeysay labada dal.
Hirgelinta heshiiska labada dal ay gaareen ayaa waxaa ka shaqeeyay Boqorka dalka Sucuudiga Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis iyo dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Maxamed Bin Zaayid si loo wanaajiyo xiriirka dalka Sucuudiga iyo Imaaraadka kala dhexeeya Eritrea iyo Itoobiya iyo sidoo kale xiriirka ay la leeyihiin dalalka Geeska Afrika ku yaalla.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sucuudiga Caadil Al-Jubeyr ayaa booqday bishii lasoo dhaafay labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea si uu usii xoojiyo heshiiska nabadeed ee ay gaareen labada dal.
Duufaanta Florence oo shan qof ku dishay Maraykanka